Traduzioni di niya da TagalogaBirmano - MyMemory
Hai cercato la traduzione di niya da TagalogaBirmano
At sila'y pinalayas niya sa hukuman.
ယုဒလူတို့ကို တရားပလ္လင်မှ ပယ်ရှားစေ၏။
ထိုအခါ လူအစုအဝေးတို့ကို မြက်ပင်ပေါ်မှာ လျောင်းကြစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏။
ရောက်သောအခါ၊ ထိုအိမ်သည် သုတ်သင်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့သော်၊
ထိုအခါ လူအစုအဝေးတို့ကို မြေပေါ်မှာလျောင်းကြစေဟု အမိန့်တော်ရှိ၏။
ယုဒပြည်မှ ထွက်သွား၍ ဂါလိလဲပြည်သို့ တဖန် ကြွတော်မူစဉ်တွင်၊
ရှေ့တော်၌ ရောင်ခြည်ကြောင့် မီးခဲတောက်လျက် ရှိ၏။
သူလျှိုတို့သည် မအိပ်မှီ မိန်းမသည် သူတို့ရှိရာ အိမ်မိုးပေါ်သို့တက်၍၊
At nilisan niya si Faraon, at nanalangin sa Panginoon.
မောရှေသည် အထံတော်မှထွက်၍၊ ထာဝရဘုရားကို တောင်းပန်လေ၏။
Na pinasagana niya sa atin, sa buong karunungan at katalinuhan,
ထိုမိန်းမအားလည်း၊ သင်သည် အပြစ်တို့နှင့် လွတ်လေပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။
ထိုအခါ ဥပမာစကားကို မိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင်တို့တွင် တစုံတယောက်သောသူ၌ သိုးတရာရှိ၍၊
ရှိမုန်နှင့် သူ၏အပေါင်းအဘော်တို့သည် လိုက်၍ရှာကြသော်၊
At sinabi niya, Ang may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig.
ကြားစရာ နားရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားပါစေဟု မိန့်တော်မူ၏။
ကိုယ်တော်ကလည်း၊ သင်တို့သည် သူတို့နှင့် အဘယ်သို့ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြသနည်းဟု ကျမ်းပြုဆရာ တို့ကို မေးတော်မူလျှင်၊
At sinabi niya, Ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao.
သို့ဖြစ်လျှင်၊ သင်တို့သည် နားမလည်ဘဲ အဘယ်သို့ နေကြသနည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။
ထိုအခါ နှုတ်တော်ကိုဖွင့်၍ တပည့်တော်တို့အား ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည်မှာ၊
ဣဇာက်သည်၊ သူတို့အဘို့ စားသောက်ပွဲကို လုပ်၍၊ အတူစားသောက်ကြ၏။
oi carol tudo bem com voc�ª (Portoghese>Inglese)chalo padhai karo (Hindi (indiano)>Inglese)atıldığını (Turco>Maori)haedui (Latino>Inglese)nakuha mo na atensyon ko (Tagalog>Inglese)play with my balls (Inglese>Swahili)what is the meaning of quickly (Inglese>Tagalog)adiós majo (Spagnolo>Catalano)bicol words translate in tagalog (Inglese>Tagalog)conduct of combat (Inglese>Tagalog)a mi ha llegado bien (Spagnolo>Catalano)to raise fund (Inglese>Tagalog)manische (Tedesco>Inglese)i didn't got my offer letter yet (Inglese>Hindi (indiano))big booty (Inglese>Francese)kamus sayur sayuran dalam bahasa arab (Malese>Arabo)mcmanus (Francese>Italiano)sa dulo man ng daigdig story (Inglese>Tagalog)rollout (Inglese>Polacco)innflytelse til å påvirke (Norvegese>Francese)pasta di semola di grano duro trafilata al bronzo (Italiano>Inglese)hidroksianizolis (Lituano>Slovacco)die dag toe ma siek is en ek moet kosmaak (Inglese>Afrikaans)a mi remite suma incasata (Romeno>Inglese)serum psa has been determined (Inglese>Polacco)